Tun Tun's Photo Diary: Pindaya Cave #5
သေချာကြည့်လိုက်တော့ ပင့်ကူက စစ်ကားကို တိုက်ခိုက်မဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်။း) အဲ့နေ.က အပေါ်မှာ စစ် မိသားစု အလှုလုပ်နေတာ။ ကြာဇံဟင်းတိုက်နေတာ တွေ.ခဲ့တယ်။
တောင်ခြေေ၇ာက်သွားတော့ ပင်းတယ မှာ နာမည်ကြီးနဲ. သစ်ပင်အကြီးကြီးတွေရှိတဲ့ နေ၇ာ ကို လမ်းလျှောက်ပြီး သွားကြည့်ခဲ့တယ်။ သစ်ကိုင်းတွေ က ကြီးလွန်းလို. တိုင်တွေ နဲ. ထောက်ထားရတယ်။
အဲ့ဒီ သစ်ပင်အကြီးကြီးတွေနားမှာ Conqueror Hotel ရှိတယ်။ တံခါးကြီး ပ်ိတ်ထားတော့ ပိတ်လား ဖွင့်လား မသိဘူး။ အဲ့မှာ တည်းမဲ့သူ ရှိပါ့မလား။ ပုံမှန်အားဖြင့် လာလည်တဲ့သူတွေ က နေ.ခင်းဘက်ကို အင်းလေး ဒါမှ မဟုတ် ကလော ကနေကားနဲ.လာပြီး နေ.ချင်း ပြန်ကျတာ များတာကိုး။
သစ်ပင်ကြီးတွေနား ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ကားရပ်ထားတဲ့ တောင်ခြေနား လမ်းပြန်လျှောက်ရတယ်။ ခုန က စိတ်ဝင်တစားနဲ. လမ်းလျှောက်လာတာ အခု ပြန်လျှောက်ကြည့်လိုက်တာ တော်တော် လှမ်းတာပဲ။း)
ဒီဆိုင်မှာ လက်ဖတ်၊ ပဲလှော်၊ တိုဖူးခြောက်ကြော် နဲ. ရှမ်းထန်းလျှက် (မုန်.ကြိုးလိမ်လို အလုံးလေး) ၀ယ်ခဲ့တယ်။ အမြည်းချထားတာလဲ စားခဲ့တယ်။ ဒီမှာ လက်ဖက်ကို တခြား နေ၇ာတွေမှာလို ပဲကြော်တွေနဲ. စားတာမဟုတ်ပဲ ပဲပုတ်ခြောက်ကြော်နဲ. တွဲစားကြတယ်။
အမြည်း (ထန်းလျှက်၊ လက်ဖတ်။ ပဲလှော်၊ ပဲပုတ်ခြောက်ကြော်။)
ဈေးဝယ်ပြီးတော့ တောင်ကြီးကို တောက်လျှောက် ကားမောင်းလာပါတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်၇ူခင်း တွေ ကို ပြန်းငေး ရပါတယ်။ လာတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ တာတွေနဲ. မတူတာတွေ ကို ဓါတ်ပုံပြန်၇ိုက်ခဲ့ပါတယ်။
လမ်းတစ်ဝက်မှာ ဒီ နွားအုပ် ကြီးနဲ. တွေ.ပါတယ်။ နွားတွေ လမ်းပေါ်မှာ ဖြတ်သွားတော့ ကား၇ပ်ပေးရပါတယ်။ ဒီတော့ နွားကျောင်းတဲ့သူက နွားတွေ ကို လမ်းဘေးဆင်းဖို. ကျိန်းမောင်း၇ိုက်နှက်နေတာ တွေ.တော့ စိတ်ထဲ မကောင်ဘူုး။ ကိုယ့်ကြောင့် အလကားနေရင် နွားတွေ အသားနာ ရတယ်လို ခံစားရတယ်။
အမှန်ကိုယ်က ဒီလို ကားရပ်ပြီး ဓါတ်ပုံဆင်း၇ိုက်ဖို. အခွင့်အေ၇းကို စောင့်နေတာ။ ကားဆ၇ာ ကို ပြောရမှာ အားနာလို.။ တကယ့်တော့ အဲဒီနွားအုပ်တွေ ဖြတ်သွားတဲ့ နေ၇ာက ရူခင်းက အင်မတန်ကို လှတာ။ အောက်က ပုံတွေက အဲနားကနေ၇ိုက်ထားတာပါ။ နွားတွေကို ကျေးဇူးတင်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။
နွားတွေ လမ်းဘေးေ၇ာက်တောင်ေ၇ာက်သွားကျပြီ။ ကိုယ့်ကြောင့်အရိုက်ခံ၇လို. သူတို. လေးတွေကို ကြည့်၇တာ အားတောင် နာမိတယ်။
ဒီပုံတွေ ကတော့ ကားပေါ်ကနေ လှမ်းပြီး ဆွဲထားတာ။ ကားခဏခဏ ရပ်ရင် ခရီးမပေါက်မှာ ဆိုးလို. တောင်ကြီးထိတောက်လျှောက်မောင်း ခဲ့ပါတယ်။
ကလေးက တန်းလန်းလေး။ အူယားစ၇ား)
ဟဲဟိုး နားေ၇ာက်တော့ ရထားလာမှာမို. ခဏစောင့်၇ပါတယ်။ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး မြန်မာ့မီး၇ထားကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ပါတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ. မြန်မာမီးရထားမစီးရတာ ၁၀နှစ်လောက်ရှိပြီ။
ဟဲဟိုး ကိုဖြတ်ပြီး ရွေညောင်ကိုေ၇ာက်တယ်။ ဆီခဏဖြည့်တယ်။ ကားဆ၇ာက နေ.လည်စာ စားမလား ဆိုတော့ ကောင်းကောင်းစားချင်လို. အငတ်ခံပြီး တောင်ကြီးေ၇ာက်မှ စားမယ် လို. ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ရွေညောင်ကနေ ညောင်ေ၇ွ (အင်းလေးကန်ရှိတဲ့မြို.) ပြီးတော့ မှ တောင်ကြီး ကိုေ၇ာက်တယ်။ ညောင်ေ၇ွ နဲ. ရွေညောင် မြို.ချင်းကပ်ရပ် နာမည်ကလဲ မှားချင်စ၇ာ။ ဘာလို.များအဲ့လိုပေးထားလဲ မသိဘူး။ ညောင်ရွေ ကနေ တောင်ကြီးကို နာရီဝက်လောက် ကားမောင်းရတယ်။ အချိန်ရ၇င် လမ်းမှာ အေးသာယာ ၀ိုင်စက်ရုံနဲ. စပျစ်ခြံ ၀င်လည်လို.ရတယ်။ ကျွန်တော်က တောင်ကြီးမှာနေ.လည်စာစား ပြီး ထန်ဆမ်း ဂူ ကို ဆက်သွားမှာမို. မ၀င်ဖြစ်လိုက်ဘူး။
at 2/21/2014 08:00:00 PM
Phyo Evergreen February 22, 2014 at 3:21 PM
ရွှေညောင်ကနေ တည့်၂ဆက်သွားရင် အေးသာယာပြီး တောင်ကြီးရောက်။ ညောင်ရွှေက ရွှေညောင်ကနေမှ ညာဘက်လမ်းခွဲသွားရတာလေ ။
Phyo Evergreen February 22, 2014 at 3:26 PM
Tun Tun February 22, 2014 at 10:28 PM
Thinzar February 24, 2014 at 9:15 PM
ပုံလေးတွေလှလိုက်တာ။ =) ပင်းတယမရောက်တာ တော်တော့်ကို ကြာနေပြီ ..